Best Day Trips handray From Berlin | Save A Train
Home > Travel Europe > Best Day Trips handray From Berlin
ny Laura 05/11/2019
Top Rated Day fitsangatsanganana haka Avy Berlin ireo na dia teo aza ny tsy maintsy Berlin maha-mahafinaritra mihitsy toerana hitsidika! Efa ampy ny zavatra tena nahasarika tany Alemaina renivohitra mba hiaro anao nonina nandritra ny andro. Na izany aza, andro nivezivezy avy any Berlin ho any amin'ny mpifanolo-bodirindrina tanàn-dehibe sy ambanivohitra afaka manolotra fialantsasatra tsara avy amin'ny vahoaka. Avy amin'ny lovely lapa ary madio mangalahala valan-javaboary ny Potsdam ny voajanahary famirapiratan'ny Havel ny ony sy ny Spree, Berlin manodidina azy manolotra betsaka ny manintona ary ny zavatra tokony hatao. Ny tanana rail sy ny fitateram-bahoaka tambajotra ho mora ny miala ary ny, and organized tours make it easy to travel further if desired.
Tsy misy afa-mandositra avy any Berlin mahazo bebe kokoa noho ny Potsdam. Noho izany tsy afaka manana ny lisitry ny andro nivezivezy avy any Berlin raha tsy izany. Ny antony dia tsotra. Ao anatin'ny 40 minitra dia varotra eto amin'ny tanàn-dehibe ho amin'ny andro Nitsangantsangana teo amin'ny zaridaina sy lapa ity Prosianina tanànan'ny mpanjaka taloha.
Manomboka ny andro nankany Potsdam nirenireny manoloana ny Old Anarana iombonana Quarter. Ny mena bricked Zavatra fomba rafitry ny Potsdam Anarana Quarter tsy manam-paharoa, tsy tany Alemaina fa amin'ny rehetra Eoropa. Na dia tany Holandy, outbuildings mitady izay mifanaraka taonjato faha-18 Jan Bouman famoronana ao amin'ny Potsdam misy azo atao.
Dresden ho Potsdam Lamasinina
Magdeburg ho Potsdam Lamasinina
12 Top Tourist Attractions in Potsdam (Alemaina)
Ny ankamaroan'ny olona tonga mandany fotoana nihantona teo am- UNESCO World Heritage toerana, Muskauer Park sy ny mahatalanjona anglisy zaridaina sy ny Neo Renaissance lapa kely voahodidina farihy. Misy zavatra manokana momba ny valan-javaboary ity dia ny hoe ny jeografia dia mivelatra hatrany na Alemaina sy Polonina! Toy izany, ny mandeha mamaky ny zaridaina dia ahitana ny fitsidihana firenena roa tonta ao anatin'ny iray voatifitra. Tiantsika fahombiazana! Tsy misy loatra ny hanao ankoatra izany, Dia toy izany ny fitsidihana ny Bad Muskau dia tsara miaraka tsiroaroa amin'ny hafa teo akaiky teo manintona tahaka ny Devils Bridge.
Berlin ny Bad Maskau Lamasinina
Dresden ny Bad Maskau Lamasinina
Potsdam ny Bad Maskau Lamasinina
Magdeburg ny Bad Maskau Lamasinina
Ok, ok! Fantatro izany dia kely ny mihinjitra tahaka ny andro lavitra. Fa indray mandeha ianao dia efa misy, ho fantatrao ny antony tsy afaka hamela azy eny ny andro lisitra nivezivezy avy any Berlin! Zavatra hatao ao Bremen ahitana ny manana sakafo hariva ao amin'ny labiera zaridaina amin'ny sambo, mihantona eo amin'ny tsara tarehy Schnoorviertel, mandeha ny lavitra ny 100 metatra ny lavany Bottcherstrasse, ary ny aina miaraka amin'ny kafe sy mofomamy eo amin'ny pototry ny Windmill. Manana gotta mahita izany ho anao!
Berlin ho Bremen Lamasinina
Hamburg ho Bremen Lamasinina
Hanover ho Bremen Lamasinina
Potsdam ho Bremen Lamasinina
Final Safidy: Dresden
Dresden manao ny andro mahatahotra diany avy any Berlin! Ny tanàna dia eo ho eo amin'ny adiny roa lamasinina avy amin'ny German-drenivohitra. Izany no misy nisasaka eo Berlin sy ny Prague, Ary dia tena kely sy mora hitety, izay midika fa na dia amin'ny andro iray ianao dia ho afaka ny hahita tena somary.
The Elbe river mizara ny tanàna; amin'ny lafiny iray dia misy ny Altstadt (na Old City), sy ny hafa, misy ny Neustadt (New City), fa maminavina izay, raha ny marina ny Altstadt vaovao!
Dresden voadaroka baomba tamin'ny tany tamin'ny faran'ny WW2 (ho azo antoka mamaky Slaughterhouse Five eo anatrehanao mitsidika, raha toa ianao ka ho tantara) ary ny Altstadt faritra indray dia tsara toy ny teo aloha ny ady, fa ny sasany amin'ireo trano ireo ihany no vita taorian'ny 2000.
Vonona ny hilatsaka ny Berlin ho an'ny sasany ny andro lehibe fitsangatsanganana? Misambotra ny mitaingina teo niaraka tamin'ny fanampian'ny Save A Train. Ny saram miafina, tsy Fuss, fahafinaretana fotsiny!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Top Rated Day fitsangatsanganana haka From Berlin” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url =ny https://www.saveatrain.com/blog/andro-nivezivezy-from-Berlin/ ‎– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby -- https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / de ny / en na / fiteny azy sy ny maro hafa.
Train Travel Grande-Bretagne, Train Travel Frantsa, Train Travel Italia, Train Travel UK, Travel Europe
Train Travel Frantsa, Train Travel Alemaina, Train Travel Italia, Train Travel Norvezy, Train Travel The Netherlands, Travel Europe